Evaporative Condenser, Jụrụ Tower, Water Ọgwụgwọ - Yubing
Anyị coolers e n'ọtụtụ ebe etinyere na dị iche iche ubi na-akpakọrịta na mma equipip.
Nlekọta dị ala na ụgwọ ike bụ nsonaazụ nke usoro enweghị nsogbu.
Ihe ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
Na-echebara ego kachasị ọnụ ahịa na ndụ gị oge niile.
Na-agbaso njikwa oru ngo a pụrụ ịdabere na ya na nzaghachi ngwa ngwa na ọrụ ahịa ahịa.
Ọkachamara Onye nrụpụta nke Slow Tower Tower
High-arụmọrụ Evaporative Condenser maka Indus ...
Ejiri otutu ndi mmadu megharia ihe eji eme ihe na ihe di iche ...
Ice ulo oru Osmosis System maka Cooli ...
High arụmọrụ & Energy Azọpụta
Belata usoro sistemụ, oriri mmiri, mmezi na nrụnye nrụnye nwere nnukwu ikike jụrụ oyi.
Nhọrọ akụ na ụba
Mee ka ụgwọ ọrụ dị oke mkpa karịa usoro ndụ niile.
Nkwụnye ma kpọọ ihe eji emepụta na ntinye dị mfe, nrụpụta akụ na ụba.
Inogide na pụrụ ịdabere
Na-anaghị emebi emebi, ogologo ndụ na ịdị arọ.
A na-etinye ụlọ elu ndị a na-ajụ oyi n'ime ụlọ ọrụ dịka otu n'ime ihe ndị dị mkpa yana ọtụtụ nnukwu ọrụ nrụpụta na ngalaba ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke na-etinye aka mgbe niile n'ichepụta, nhazi ma ọ bụ ịgbakọta ngwaahịa. Usoro ọrụ mmepụta ihe dị iche iche na-eme ka mmiri ahụ dị ọkụ nke a na-agbanye n'ime ụlọ elu jụrụ oyi. Towerlọ elu dị jụụ nozzles na-agba mmiri ọkụ n'ime "jupụta mgbasa ozi" ebe enwere oke elu na nke a na-eduga na kọntaktị ikuku-mmiri iji mee ka mmiri dị jụụ. Jụrụ ụlọ elu na ọtụtụ-eji mmanụ refineries, petrochemical osisi, kwes ike osisi, nuklia osisi, nri nhazi osisi, eke gas osisi wdg
Anyị ga-enwe obi ụtọ ịnata ajụjụ gị ma nye nkwado ozugbo.
ANY BL BLOG
Iri na Otu 11, 2020
Ngwa zuru ezu nke Towerlọ Egwuregwu Cooling
A na-eji ụlọ elu jụrụ oyi mee ihe maka ikpo ọkụ, ikuku, na ikuku ikuku (HVAC) na ebumnuche ụlọ ọrụ. Ọ na-enye usoro arụmọrụ dị oke ọnụ ma na-arụ ọrụ ike dị mkpa nke jụrụ oyi. Ihe karịrị ụlọ ọrụ mmepụta ihe 1500 na-eji nnukwu mmiri iji mee ka osisi ha dị jụụ. HVAC ...
Ọnwa Iri na Otu 05, 2020
Maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-eji ụlọ elu jụrụ oyi maka akụrụngwa ya, ụdị usoro ọgwụgwọ mmiri dị jụụ na-adịkarị mkpa iji hụ na usoro ọrụ dị mma na ogologo ọrụ ọrụ ndụ. Ọ bụrụ na mmiri ụlọ elu jụrụ ajụ, ahịhịa na-eto eto, nsị, mpịakọta, na corrosion nwere ike r ...
Ọnwa Iri na Otu 01, 2020
Okwu Mmalite nke owlọ Egwuregwu
Coolinglọ elu dị jụụ bụ onye na-ekpo ọkụ ọkụ, n'ime nke ewepụrụ okpomọkụ site na mmiri site na kọntaktị n'etiti mmiri na ikuku. Towlọ elu dị jụụ na-eji mmiri evaporation ajụ okpomọkụ site na usoro ndị dị ka ime ka mmiri na-ekesa mmiri eji mmanụ mmanụ, ụlọ ọrụ kemịkalụ, osisi ike, igwe nchara ...
Ilọ ọrụ anyị na-efe
ihe ọ foodụ -ụ mmanya